सेक्स टुरिजमको लागि बिश्व प्रख्यात १० देश यी हुन् ! - VOICE OF NEPAL
सेक्स टुरिजमको लागि बिश्व प्रख्यात १० देश यी हुन् !
३० बैशाख २०७६, सोमबार १७:३१ 926 ??? ???????
केही मानिसहरुका लागि टुरको योजना फुल रोमान्चकता हुन्छ । सेक्स टुरिज्म यस्तै रोमान्चकताको एक भाग हो । जो कयौं देशका लागि सबै छिटो र धेरै कमाइ गर्ने स्रोत पनि हो । जहाँ ग्राहकका रुपमा धेरै पुरुषहरु सहभागी हुन्छन् भने सर्विसका लागि बढी महिला । करोडौंको कारोबार गर्ने यस उधोगका कारण देशलाई अत्यन्तै फाइदा पुग्ने गरेको छ ।
यही कारण पछिल्ला केही वर्षहरुमा धेरै देशहरुले सेक्स टुरिज्मलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । जसका कारण उनीहरुको इकोनोमीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । को हुन्, ती टपटेनमा पर्ने १० देशः
मड्रिड, बार्सिलोना र इबिजाजस्ता संसारकै चर्चित र प्रसिद्ध पर्यटकीयस्थल छन् । तर, स्पेन आर्थिक वृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै सेक्स टुरिज्म पनि सुरु गरिसकेको छ । वेश्वावृतिलाई कानुनी रुपमै स्वीकार गरेर यसलाई युरोपकै सबैभन्दा फेमस सेक्स टुरिज्म डेस्टिनेशन बनाउने काम चलिरहेको छ । यहाँका सेक्स वर्कर्समा धेरै दक्षिण अमेरिकी र स्पेनिश महिलालाई देख्न सकिन्छ ।
५. डोमिनिक रिपब्लिक
नेदरल्याण्ड्सका आम्सर्डम आफ्नो सौन्दर्यका लागि कम र सेक्स टुरिज्मका लागि ज्यादा प्रसिद्ध छ । यहाँको रेड लाइड डिस्ट्रिकमा निम्नदेखि उच्च क्लासका सेक्स वर्कस उपलब्ध हुन्छन् । यसका साथै यहाँ सेक्स सप, स्ट्रीप क्बल पनि उतिकै फेमश छन् । वेश्वावृति कानुनी भएकाले यहाँ सुरक्षाको विशेष ख्याल राखिन्छ । यस कामका लागि समय, दिन र उमेरको आधारमा तपाईले लगभग २५ देखि १०० युरोसम्म खर्च गर्नुपर्न सक्छ ।
सुन्दर देश इण्डोनेशिया चाइल्ड सेक्सका ट्राफिकिङका लागि चर्चित छ । यहाँ यसलाई वैधानिक मानिन्छ, जसका कारण विदेशबाट इण्डोनेशियामा ओइरिने पर्यटकहरुको घुइचो लाग्छ । इण्डोनेशियाका यौनकर्मीहरुलाई सोसल मिडियामा मोलतोल गरेर अर्को देशमा पनि पठाउने गरिन्छ । आर्थिक वृद्धिका लागि पनि यसलाई मुख्य हतियार मानिन्छ ।
फिलिपिन्समा वेश्वावृति गैरकानुनी छ । यसका लागि यहाँ कयौ कडा नियम कानुनहरु बनाइएका छन् । तापनि यहाँ चोरी बाटोबाट सेक्स ब्यापार गरिन्छ । यहाँ झण्डै ५० लाख यौनकर्मीहरु रहेको बताइन्छ । जसका ग्राहकहरु ज्यादा इष्ट एसिया र पश्चिमी देशहरुमा आउने विजनेशम्यानहरु हुन् । आश्चर्यजनक कुरा त यो छ कि यहाँ आउने ४० देखि ६० प्रतिशत मानिस फिलिपिन्स घुम्नलाई होइन्, सेक्स टुरिज्मको मजा लिन आउँछन् ।